ကြားဖြတ်ပြောဆိုခြင်း (Interruptions) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on February 19, 2013 at 18:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ဖက်သားကစကားပြောနေရင်း ကိုယ်ကတစ်ခုခုမှတ်ချက်ပေးလိုတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြတ်ပြောရမှန်းမသိအောင် လေဖောင်ဖွဲ့နေလို့ အခက်ကြုံရဖူးပါသလား။ ဖြတ်မပြောလို့ကလဲ မဖြစ်ဆိုတော့ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရကြပ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် စကားများတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ခဏဆိုင်းသွားမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်ကောင်းပါပဲ။ လူတွေဟာ စဉ်းစားပြီဆိုလျှင် “အင်း၊ အမ်း၊” err…, umm… စတဲ့ အသံတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာကိုယ်ပြောဖို့အလှည့်ကျတာပါပဲ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ လည်းတမင်တကာတဖက်သားသတိထားမိအောင်အချက်ပြရပါတယ်။ ဥပမာ လက်ထောင်ပြတာမျိုး၊ ထိုင်နေတဲ့ခုံကနေ ရှေ့ကိုကုန်းလိုက်တာမျိုး၊ လည်ချောင်းဟန့်တာမျိုး၊ မျက်ခုံးပင့်ပြတာမျိုး၊ ကိုယ်ကစပြီး “အမ်း” အသံထွက်ပြတာမျိုးတွေပါ။ ဒီလိုအခါအခွင့်သင့်လာတဲ့အခါ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဖြတ်ပြောပုံလေးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Polite ways of interrupting
l’m sorry to interrupt, but would you mind if I just said something here?
ဖြတ်ပြောရတာတော့အားနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တစ်ခွန်းလောက်ပြောချင်လို့ စိတ်မရှိပါနဲ့။
Can I just ask youaquick question here, please?
Excuse me, but I'm not sure I fully understand what you're saying.
Could I just take this opportunity to say something, please?
Sorry about the interruption, but...
Apologies for jumping in like this, but...
ဒီလိုမျိုးဖြတ်ဝင်ပြောရတာတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် . .
Would you mind if I just jumped in here?
Is it OK if I jump in forasecond’? I think everyone should be aware that...
ခဏလေးဖြတ်ပြောချင်လို့ရမလား။ . . . ကိုလူတိုင်းသတိပြုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
If I might just add something here...
I'm sorry but I think I'm missing something here. Could you explain how...?
တစ်ခုခုတော့လိုနေတယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ . . . ဆိုတာရှင်းပြပါလား။
Sorry about the interruption, and I apologise if you're about to mention this anyway, but I'm having some trouble understanding...
ဖြတ်ပြောရတာအားတော့နာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာကိုပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
More direct ways of interrupting (ပို၍တဲ့တိုးနိုင်သောဖြတ်ပြောပုံများ)
တစ်ခုတစ်လေမှတော့တဲ့တိုးပြောမှရမယ့်အခြေအနေတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဖြတ်ပြောသူက အသက်၊ ရာထူး ပိုကြီးသူဖြစ်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးပြောနိုင်ပါတယ်။
Waitaminute! What about...?
ခဏနေပါဦး။ . . . အတွက်ရော
Erm, Justaminute, what about...?
Justamoment! What about...?
l must just say at this stage that...
ဒီအဆင့်က . . . လို့ပြောရမယ်။
Do you really think so? My impression is that...
ဒီလိုပဲထင်လို့လာ။ ငါ့အမြင်ကတော့ . . .
That's impossible! It's perfectly clear that...
ဒါမဖြစ်နိုင်တာပဲ။ . . . ဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ။
...which was voted down by everyone else.
တခြားလူအားလုံးကပယ်ချထားတဲ့ . . .
...who left early without even saying goodbye.
နှုတ်မဆက်ဘဲဆိုပြန်သွားတဲ့သူ . . .
[relative pronoun တွေဖြစ်တဲ့ who, what, when, where... ကိုသုံးပြီးသူ့စကားကိုငြင်းပယ်ဖြတ်ပြောနိုင်သည်။]
Training?/ helpful?/ Profitable?
Sorry, go ahead. ဆက်ပြောပါ။
Sorry, you were saying.. ခင်ဗျားပြောနေတာက
Harriet: Thank you all so much for coming along today. As you know, we're all extremely proud of the progress we've ma de so far. Unemployment is down, the economy 15 up an d. erm. ..
Journalist: I'm sorry to interrupt you here, but the latest ﬁgures seem to show that unemployment is up and running at more than 12%.
Harriet: Well, If you just let me ﬁnish, I'll be going into that in more detail. [back to her discussion], Anyway, as you know, we're also doing great things for the environment. We've set up more wind farms than any previous government, and, erm. ..
Journalist: I do apologise for jumping in like this, but could you please explain what it is that you mean by “great things"? I mean, this government has invested in more coal-powered stations than any other government in the history of this country.
Harriet: Well, as l was saying before l was so rudely interrupted, l think we can all be proud of the fact that hospital waiting lists have almost disappeared, and, erm...
Journalist: Disappeared? You're joking! I can't see how you can claim that when hospital waiting lists are actually longer than ever.
Harriet: Look, it you'd just let me ﬁnish, I'll give you the ﬁgures for this and, erm. ..
Journalist: Don't bother! This government isajoke and you know it.
Harriet: I was just about to say that!
တဈခါတဈလမှော တဈဖကျသားကစကားပွောနရေငျး ကိုယျကတဈခုခုမှတျခကျြပေးလိုတဲ့အခါ ဘယျလိုဖွတျပွောရမှနျးမသိအောငျ လဖေောငျဖှဲ့နလေို့ အခကျကွုံရဖူးပါသလား။ ဖွတျမပွောလို့ကလဲ မဖွဈဆိုတော့ ဘယျအခြိနျ၊ ဘယျလိုမြိုးဖွတျရမယျဆိုတာ စဉျးစားရကွပျပါတယျ။ ဘယျလောကျ စကားမြားတဲ့လူပဲဖွဈဖွဈ တဈခြိနျခြိနျမှာတော့ ခဏဆိုငျးသှားမှာပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျ့အတှကျ အခှငျ့ကောငျးပါပဲ။ လူတှဟော စဉျးစားပွီဆိုလြှငျ “အငျး၊ အမျး၊” err…, umm… စတဲ့ အသံတှေ လုပျတတျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာကိုယျပွောဖို့အလှညျ့ကတြာပါပဲ။ ဒီလိုနညျးတှနေဲ့မှမရဘူးဆိုရငျတော့ လညျးတမငျတကာတဖကျသားသတိထားမိအောငျအခကျြပွရပါတယျ။ ဥပမာ လကျထောငျပွတာမြိုး၊ ထိုငျနတေဲ့ခုံကနေ ရှကေို့ကုနျးလိုကျတာမြိုး၊ လညျခြောငျးဟနျ့တာမြိုး၊ မကျြခုံးပငျ့ပွတာမြိုး၊ ကိုယျကစပွီး “အမျး” အသံထှကျပွတာမြိုးတှပေါ။ ဒီလိုအခါအခှငျ့သငျ့လာတဲ့အခါ ယဉျယဉျကြေးကြေး ဖွတျပွောပုံလေးတှကေို အောကျမှာဖျောပွထားပါတယျ။
ဖွတျပွောရတာတော့အားနာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတဈခှနျးလောကျပွောခငျြလို့ စိတျမရှိပါနဲ့။
ဒီလိုမြိုးဖွတျဝငျပွောရတာတောငျးပနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ . .
ခဏလေးဖွတျပွောခငျြလို့ရမလား။ . . . ကိုလူတိုငျးသတိပွုသငျ့တယျလို့ထငျတယျ။
တဈခုခုတော့လိုနတေယျထငျတယျ။ ဘယျလိုဖွဈလို့ . . . ဆိုတာရှငျးပွပါလား။
ဖွတျပွောရတာအားတော့နာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဟာကိုပွောမှဖွဈမယျဆိုရငျတော့
More direct ways of interrupting (ပို၍တဲ့တိုးနိုငျသောဖွတျပွောပုံမြား)
တဈခုတဈလမှေတော့တဲ့တိုးပွောမှရမယျ့အခွအေနတှေလေညျးရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဖွတျပွောသူက အသကျ၊ ရာထူး ပိုကွီးသူဖွဈတဲ့အခါဒီလိုမြိုးပွောနိုငျပါတယျ။
ခဏနပေါဦး။ . . . အတှကျရော
ဒီအဆငျ့က . . . လို့ပွောရမယျ။
ဒီလိုပဲထငျလို့လာ။ ငါ့အမွငျကတော့ . . .
ဒါမဖွဈနိုငျတာပဲ။ . . . ဆိုတာ ရှငျးနတောပဲ။
တခွားလူအားလုံးကပယျခထြားတဲ့ . . .
နှုတျမဆကျဘဲဆိုပွနျသှားတဲ့သူ . . .
[relative pronoun တှဖွေဈတဲ့ who, what, when, where... ကိုသုံးပွီးသူ့စကားကိုငွငျးပယျဖွတျပွောနိုငျသညျ။]
Sorry, go ahead. ဆကျပွောပါ။
Sorry, you were saying.. ခငျဗြားပွောနတောက
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on February 19, 2013 at 23:08
Thanksalot, sir.. ^_^
Permalink Reply by uzanaka on February 20, 2013 at 9:49
thanks you so much about this lesson.
Permalink Reply by padout,layy on February 20, 2013 at 10:02
Permalink Reply by u san win on February 20, 2013 at 10:42
oh this lessons is very good,very useful for me,thanksalot,daily the person relation to one and another person,
so and so very useful for every body ,
Permalink Reply by Thike Htun on February 20, 2013 at 10:58
Permalink Reply by Naing Htun on February 20, 2013 at 11:02
Permalink Reply by kaythikhaing on February 20, 2013 at 12:03
Thanksamillion bro,...
Permalink Reply by Ratan Biswas on February 20, 2013 at 13:13
Permalink Reply by Myo Win on February 20, 2013 at 15:23
Permalink Reply by khin mg htay on February 20, 2013 at 15:41
Permalink Reply by aungthan moe on February 20, 2013 at 16:45
thanks u , now i am studying
Permalink Reply by upokun on February 21, 2013 at 3:05